Indawo yakho yokuhlala iphakathi kwezinye zezona zindlu zibalaseleyo zembali yaseArrowtown kunye nezitiya kodwa yimizuzu emi-2 kuphela yokuhamba ukuya entliziyweni yelali eneendawo zokutyela ezininzi, ii-pubs kunye neevenkile zekofu.
Isitudiyo sinendawo yayo yokupaka elula kwaye nangona incanyathiselwe endlwini iyilwe ngobumfihlo bakho kunye nentuthuzelo yakho engqondweni, ngokungena kwayo okwahlukileyo, impompo yobushushu kunye nokufudumeza okuphantsi kwi-ensuite.
I-queen bed ineengubo zombane, amashiti asemgangathweni kunye nemiqamelo kunye ne-multi seasonal goose down duvets.
Igumbi lokuhlambela eline-ensuite linezifudumezi eziphantsi kunye nesepha, ishampoo/i-conditioner kunye nesixhobo sokomisa iinwele. Istudiyo simenyezeliswe kabini kwaye sinempompo yobushushu / iairconditioner ukugcina ukhululekile.
Kukho iTV/Netflix kunye neWi-fi ebonelelweyo.
Ibha yakusasa ekhululekileyo enezixhobo zokwenza iti / ikofu, itoaster, ifriji kunye nemicrowave. Iziqholo ezibalulekileyo ukulungiselela amashwamshwam / izidlo ezilula (qaphela: akukho zixhobo zokupheka).
Itafile yangaphandle kunye nezitulo kwigadi engaphambili kwiziselo zakho zangaphambi kwesidlo sangokuhlwa ngaphambi kokuba ubhadule ukuya kwenye yeendawo zokutyela ezininzi zeArrowtowns.
Phuma ecocekileyo ifakiwe.
Nje ezantsi induli ukujoyina i-Arrow River track yokuhamba. Lo mzila ulula utshintsha kunye namaxesha onyaka - imibala emihle yasekwindla, iiqabaka ezimangalisayo ebusika, iilupins ezimibalabala zokubulisa intwasahlobo nabantwana bonwabele umlambo ehlotyeni. Kumhambi onzulu ngakumbi kukho iindawo ezininzi zokuhamba ezintle ukusuka kwiyure enye ukuya kusuku olupheleleyo. Ukuqhuba okufutshane ukuya eLake Hayes apho unokuhamba khona umkhondo omhle welophu kwiiyure ezi-1 ½.
Ukuhamba ngokulula kwindawo esihlala kuyo ukuya kwiindawo zokutyela ezininzi, iMyuziyam, igolide, iLali yaseTshayina, ukuqesha ibhayisekile, i-superette, ivenkile yokuthenga, ikhemesti njl.njl.
Umboniso bhanya-bhanya kaDorothy Browns uluncedo kwilali ecaleni kweendawo zokutyela, imivalo kunye neeresityu eziphumelele ibhaso.
Ukuhamba ngemizuzu eli-15 kukusa kwindawo yokuthenga yaseFrankton nazo zonke iivenkile ezibalulekileyo kubandakanya iivenkile ezinkulu, indawo yokuhlamba impahla, indawo yokwenza iinwele njl.njl.
Ukuhamba kamnandi okanye ukuqhuba okufutshane ukuya eMillbrook Golf Resort apho wonke umntu wamkelekile ukwabelana ngezibonelelo ezininzi.
Ukuba uceliwe ndiyavuya ukukubulisa xa ufika. Ndicela undazise ukuba ungathanda ndenze njalo, kungenjalo zenzeni ekhaya kwaye sizoyihlonipha imfihlo yenu.